Samsung Galaxy S8: 6 GB nke Ram na ụbọchị izizi mbụ | Gam akporosis
Ka anyị na-abịaru nso ka na-enen nnukwu unveiling ụbọchị, ọzọ asịrị na leaks iputa gburugburu Samsung si ọzọ flagship, na Galaxy S8 na S8 gbakwunyere. Ọ bụrụ na naanị ụbọchị ole na ole gara aga, anyị na-agwa gị maka ọnụahịa nke smartphones ọhụrụUgbu a, anyị maara ihe karịa gbasara RAM na ụbọchị ntọhapụ mbụ ya.
Onye ọrụ Twitter @mmdj_china, nke amaralarị maka onyonyo leaked ọ bipụtara nke Galaxy C5 Pro, enyela aka Ozi ọhụrụ banyere ọdịiche ndị China nke Galaxy S8, yana mmalite ahịa na United States nke ọkọlọtọ na-esote South Korea.
Dabere na @mmdj_china, All Chinese iche iche nke Galaxy S8 na Galaxy S8 Plus ga-Njirimara 6GB nke Ram na nwere a kacha nta nke 64GB nke nchekwa (na nke kachasị nke 128 GB).
Ndị na-azụ ahịa China ga-enwe ike ịmalite iburu Galaxy S8 ọhụrụ ha n'oge izu nke atọ nke Eprel, ebe igba egbe na United States ga-ewere ọnọdụ na Eprel 14, otu ụbọchị tupu ụbọchị a nụchara asịrị. Ya mere, ụbọchị 29 nke March maka nkwupụta dị ka ihe ga-ekwe omume.
Nkwenye nke 6 GB nke RAM site na "leaker" a abụghị ihe ijuanya na-eche na China ekwenyelarị ikike a maka ọdịiche ndị China maka ọnwa anọ yana nke @mmdj_China ekwenyelarị ya n'izu ole na ole gara aga. Ihe dị iche ugbu a bụ na 6 GB nke RAM agaghị abụ naanị maka ụdị dị iche iche e rere na China, mana maka ụdị niile dị n'ahịa ndị China n'ihi n'eziokwu, ọtụtụ ndị na-emepụta China amalitelarị itinye ikike RAM a na smartphones elu ha. ... Otú ọ dị, anyị amaghị ma ọ bụrụ na a ga-etinye atụmatụ a maka ụdị Galaxy S8 e rere na United States na mba ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy S8: 6GB nke RAM na ụbọchị ntọhapụ mbụ
Postknight bụ egwuregwu dị egwu na-egwuri egwu nke ị ga-enwe karịa karịa ka ị chere